Lapho ihlela ukuba kube ukuthengwa imoto kunezinkinga eziningi. Kanjani futhi kuphi imoto usesimweni esihle lobuchwepheshe - ngokusebenzisa umngane, isikhangiso noma emakethe? Indlela yokubona nezimoto odometer nesisontekile, yephukile, repainted? Ekugcineni, njengoba isheke phezu obuku imoto, okuyinto lomthetho "ukuhlanzeka"?
Ngeke banikeze iziyalo mayelana nokuthi ukuthengwa imoto entsha. Inhloso sihloko - usitshele mayelana nendlela yokugwema ekuzuzeni nemoto eyebiwe noma ngokungemthetho vvezonnogo emakethe yesibili. Ngakho, unqume emshinini, waxoxa intengo nomthengisi, futhi awukwazi ukulinda ukukhokha imali bese beshayela. Ungasheshi! Kufanele uhlole ukuthi imoto hhayi intshontshiwe. Sazi kanjani ukuthi uchaze ngezansi, kodwa okwamanje, ngokucophelela ukufunda imibhalo - ezimweni eziningi "zizitshela" wena ngekusasa imoto. Nasi uhlu zabo: isitifiketi sokubhalisa (uma imoto kwi-akhawunti), PTS (isitifiketi imoto), GTD (cargo amasiko isimemezelo), ilayisensi yokungenisa namasiko UWarrant.
Isihloko - lena idokhumenti main. Nakani ifomu. Njengomhlaba imali yamaphepha, it is ekhiqizwa ngesikhathi amabhizinisi "Goznak". Ngenxa yalokho, it has ngezinga elithile Ukuvikelwa, okungukuthi - amamaki wamanzi. Bona kufanele ibonakale nalapho kuqhathaniswe efomini. Kwezinye izimo, kungase kudingeke ingilazi Ukhulisa. TCP uqobo akha kumele abe izinga efanele futhi ngeke "sihlanzwa" (ngale ndlela nabakhwabanisi ukubhubhisa Imininingwane yasekuqaleni futhi overprinted elisha). Uma uyikha phezulu le phambi PTS circle noma umugqa holographic. Thatha sihlolisise kuso. Izithombe amalebula kumele acace futsi akucace. Futhi-ke, uyiqhamukela ngasohlangothini akufanele sibheke njengokungathi wanamathela tape. Esikhathini ekhoneni elingenhla esinxeleni ngesimo TCP kuyinto "rosette". Uma ushintsha engela, uphendulela grey (emehlweni ngqo umbala walo egqamile green). Futhi, isithombe volumetric. Lokhu kungabonakala, nje isizathu sidonsa.
Ngokuqinisekile kubafundi bethu abakwazi ukulinda ukuze ufunde indlela ukuhlola umshini ukuhayijekha i. Ungagijimeli! Uma TCP has a watermark kanye yakho uyiqhamukela ngasohlangothini futhi "rosettes" konke kuhamba kahle, hamba ezijulile ekutadisheni okuqukethwe idokhumenti. Hlola chungechunge nenombolo. Eyokuqala Izinombolo ezimbili - ikhodi endaweni lapho ipasipoti yakhishwa. Kulesi sigaba, ungakwazi ngokushesha ukuthola uma lishintshiwe. Kukhona amaphuzu amabili abalulekile. Ukuze izimoto yasekhaya - iphasiphothi yase-ekwabela kwemboni (Vaz inekhodi esifundeni 63). Ukuze izimoto - PTS unikeza isevisi amasiko endaweni zavunyelwa izimoto. Lokhu kungabonisa ukuthi amasiko ushaye phezu iphasiphothi (eligoqiwe ekhoneni ephansi kwesokunxele). Futhi, inani isigaba 23 kufanele kube igama amasiko. Ngaphezu kwalokho, ifomu kudinga khona uphawu siqu futhi isiginesha mphathi, wahlanganyela yokubhaliswa PTAs. Akwamukelekile ukuthi passport nekhodi yesifunda wakhishwa omunye. Kungcono uyeke ukuthenga imoto esinjalo.
amanothi Kuyadingeka futhi impinda
Uma kukholamu "Special Amanothi" iqukethe inani GTE ke cishe, amasiko imoto usule ngokwethembeka. Uma imoto okuthengiswa i-passport impinda, ke kuyasolisa impela. Imikhonyovu ngokukhethekile "ulahlekelwe" imibhalo for imoto , bese uthola abantu ngokusebenzisa igama elithi "ubumsulwa" TCP yabo. Noma ipasipoti ubhujiswe, yebo, bayimpango ngamabomu (ezishile, izinyembezi) bese uya igatsha eliseduze we amaphoyisa omgwaqo, basuke lapho unikezwa olusemthethweni ikhophi "ukuhlanzeka". Uma you fanele khonondo PTSD, ungathumela isicelo (kunoma yiluphi uhlobo) namasiko iziphathimandla ukuqinisekisa "ukuhlanzeka" yemoto.
Kanjani ukuhlola umshini ukuhayijekha i?
Nokho, sesifike kulesi sigaba. Hlola ukuthi imoto njengoba eyebiwe, can iyiphi traffic iphoyisa ngokusebenzisa phansi "Auto". Kodwa lokhu kwenzeka kuphela kubantu izimoto Russian. Kusekhona senzakalo ithuba nge imoto, intshontshiwe phesheya futhi international uhlu lwabantu abafunwa. Kuningi yalezi zimoto hit izwe lethu 1994-95, lapho amaphoyisa omgwaqo-Interpol neze benana ulwazi. Ngokwezibalo, njalo imoto 2nd angaphandle, vvezonnaya e minyaka, "omnyama" esikhathini esidlule. Manje ulethe emotweni Russian intshontshiwe nzima nakakhulu.
Naphezu yokungabatholi Interpol asebenzayo kakhulu ezweni lethu, umlando iyiphi imoto ungakwazi ukuthola ngaphandle kwezinkinga. Kwaphela iminyaka eminingi, inkampani isebenza, ukusungula oxhumana ne amaphoyisa omgwaqo, Interpol kanye Customs and ukuqinisekisa ukuba semthethweni zokukhokhelwa endaweni kwesinye isifunda. Thola ulwazi, angakwenza ngomlomo noma ngokubhala (ngesimo isiphelo sesimiso izimoto "bahlanzwa 'nesignesha abasebenzi loMkhandlu amaphoyisa omgwaqo). Isikhathi sokulinda we dokhumenti esingaphansi kwesonto. Manje uyazi ukuthi ukuhlola umshini ukuhayijekha i. Kodwa kukhona enye into ebalulekile okudingeka ucabange ngaso.
Izinkinga amayunithi inombolo
ERussia, imoto bungabonakala ISIZINDA ezintathu: chassis, injini nomzimba. Ngokwesibonelo, eJalimane, eyodwa kuphela - emzimbeni. A nini kungase kuphakame isimo lapho Umnikazi walesi imoto useshintshe injini. Ngesikhathi Mechanics efanayo eyayigcwele ku motor inombolo entsha ubudala, ngoba akungqubuzani ukukwenza. Futhi siba imoto ngokushesha ukuthola isimo isigebengu. By endleleni, uma amaphoyisa omgwaqo (owazi indlela aphule imoto lokweba) imemezela ukuthi imoto yakho intshontshiwe, kwakungase nje ukudida ngayo imoto-double. Njengoba ojwayelekile, abahloli ukuhlola kuphela amadijithi lokugcina eside VIN-inombolo. Futhi ngezinye izikhathi kungaba ifaniswe izinombolo samanje emakamelweni izimoto ezebiwe.
Thenga wabenza ogunyazwe
Inketho engcono - ukuthenga imoto izinkampani ezithile (imishini ekuletheni oda) noma wabenza abagunyaziwe. Ihhovisi Serious akasoze ukuxhumana imishini "omnyama". Babehlale ukuchitha izimoto presale futhi unike isiqinisekiso. amafemu okunjalo kancane bese amanani abo eqolo, kodwa nakanjani ngeke ukuzisindisa ekuhluphekeni.
Sithemba ukuthi lesi sihloko mayelana nendlela ukuthola imoto njengoba eyebiwe noma cha, iye yaba usizo. Futhi ekugcineni ...
Okufanele ukwenze uma uthenge imoto eyebiwe?
Ngokwezibalo, uma umuntu wathenga imoto njengoba eyebiwe, khona-ke ezimweni eziningi izohlala njengenhlangano igalaji ezingenalutho, kanye esikhwameni awunalutho. Imoto ebuyiselwa umnikazi wangempela, futhi umthengi uzokwazi ukuba zitshele lo ukubuya izimali zabo, kuphela uma angikwazi ukuthola isigebengu. Kodwa kaningi ukuthola akunakwenzeka. Ngakho-ke zihlobene inqubo yokuqinisekisa iba esetshenziswa car sina kakhulu.
Amsterdam, emiseleni, amanzi hambo uhamba Amsterdam
Small umfundi amaqhinga: kudlule kanjani gosy, uma ungazi lutho?
Pegova Irina Sergeevna: Filmography, biography, ukuphila actress komuntu siqu
Zitshalwa kwabesifazane - mkhuba langempela kwesizini!